I-Riverview-remote izisebenzi ziphupha! Ukuhlala isikhathi eside kusebenza. - I-Airbnb
I-Riverview-remote izisebenzi ziphupha! Ukuhlala isikhathi eside kusebenza.
Ilungele izisebenzi ezikude. Isikhala esiningi sokusetha ihhovisi. Ikhaya elivulekile elingu-3000 sq ft likulethela ukunethezeka ngesitayela. Isondelene kakhulu ne-Leavenworth nayo yonke imisebenzi eletha le ndawo. Sikukhuthaza ukuba uphume futhi uhlole, kodwa abaningi bafuna ukuhlala futhi baphumule endaweni enokuthula nangaphandle. Lokhu emphakathini othulile, ngakho sidinga ukuthi uhloniphe amahora okuthula aphakathi kuka-9pm-8am. Leli khaya alifanelekile imicimbi noma labo abafuna ukuza emcimbini.
Kusukela lapho ufika, uzothintwa yileli khaya lesimanje kodwa elithokomele elinendawo enokuthula okuphelele. Vuka njalo ekuseni uye emfuleni omusha nomoya wehlathi, uphuze ikhofi, uhleke futhi wabelane ngokujabulela iholide lakho ngenkathi ubuka ilanga likhuphuka esibhakabhakeni futhi uhlele izinsuku zakho zokuzijabulisa. Umndeni ovulekile/ikhishi/indawo yokudlela ikuvumela ukuba wabelane ngomzuzu nomzuzu ndawonye futhi ikhishi elinakho konke okudingayo liyiphupho lompheki elinakho konke okudingayo ukulungiselela ukudla kwakho okuthandayo.
Uzoba nakho konke okudingayo ngesikhathi sokuhlala kwakho, kuhlanganise i-inthanethi engenantambo, ama-TV amabili ane-cable, negumbi lokuhlanza izingubo. Izinto ezibalulekile ezanele, (i-shampoo, izinsipho, i-tp, izikhwama zemfucumfucu, amathawula ephepha) ukuze sikusize ngempelasonto. Zinza futhi ulungiselele ukudla okumnandi ekhishini elivulekile, futhi phakathi nezinyanga ezifudumele, ungajabulela i-patio yangaphandle evulekile ngenkathi upheka ngosuku olujabulisayo. Sebenza nge-grill yegesi bese ulungiselela ama-juicy burgers ngenkathi uthatha imisindo yomfula ethokomele. Njengoba kunezihlalo zangaphandle ezanele zeqembu lakho lonke, lokhu bekungeke kube ukuphumula okukahle kakhulu ekuphileni kwansuku zonke. Lapho wena nabalingani bakho nikulungele ukuyibiza ngobusuku, niya emakamelweni okulala angu-4 avulekile, wonke anombhede omkhulu, ukuze uphumule ngolunye usuku olujabulisayo lokuqwala izintaba, ukuhlenga, ukushushuluza eqhweni, ukuthenga noma ukuphumula nje.
Noma ngabe yini wena nezivakashi zakho eniyijabulelayo, uzokuthola kulula ukufinyelela kuleli khaya elihle. Uzungezwe amahlathi, amapaki nokuqwala izintaba okuphawulekayo, ukuhlenga kanye nezindawo zokushushuluza eqhweni. Iyipharadesi lomthandi wangaphandle. Uma uthanda ukuthenga nokudla futhi ujabulele isiko lendawo, i-Leavenworth iqhele ngamakhilomitha angu-4 futhi ipakisha i-punch yomsebenzi enezitolo eziningi, izindawo zewayini, izindawo zokudlela, ama-spa, nokuningi. I-Leavenworth yaziwa ngemicimbi nemikhosi yayo ngakho qiniseka ukuthi uhlola ikhalenda ye-inthanethi yedolobha uma usufikile! Ngemva kosuku emfuleni noma emathafeni noma ukunambitha amawayini edolobheni futhi ujabulele ubuhle bedolobha, buyela emuva ukuze uzipholele e-spa nabangane bakho. Uzozithola ubuyela kuleli khaya unyaka nonyaka, hhayi nje ngendawo yalo ephawulekayo, indawo ezungezile, nemisebenzi, kodwa indlela okwenza ngayo wena nabathandekayo bakho nizizwe, nisongwe ngokunethezeka, nizungezwe yimvelo kanye nomfula wendlu kanye nomphakathi wase-Leavenworth.
4.91 · 66 okushiwo abanye
Imisindo ephumuzayo yomfula kanye nokuzijabulisa okubukwayo kwezinyoni nezilwane zasendle kuzokwenza ube nokuthula.
Leli yikhaya lokuzingenela. Ngingase ngivele ukuze ngizethule futhi ngizotholakala uma kukhona okudingekayo.